Kumba Kumba Magetsi Magetsi Vagadziri uye Vatengesi - China Kumba Magetsi Magetsi Fekitori
Zvinotarisirwa kuti mune ramangwana chakuvhuvhu musika, kuvandudza kumhanya kwepuroma kuumbwa kuchakwira kupfuura mamwe maforoma, uye chikamu muforoma indasitiri ichawedzera zvishoma nezvishoma. Pakati pavo, epurasitiki muforoma kugadzira tekinoroji kazhinji inopa inotevera kusimudzira maitiro: //cdncn.goodao.n ...
Wide chikumbiro 3D rokudhinda muforoma kugadzira. 3D kudhinda kunyorera kugadzirwa muforoma mhango inzira nyowani mukuvandudza kweforoma muforoma. Iyo simbi yekuwedzera-yakadzora zvinhu musanganiswa wekugadzira tekinoroji yakakosha nzira mumunda we 3D kudhinda. Parizvino, h ...
Kuzivikanwa kweforoma yakasanganiswa yekugadzira unit uye tekinoroji yayo. Pamusoro pezvo kuumbwa kune mashandiro ekuzvidyisa otomatiki, kutsika-tsika kugadzira, lamination metering, ukobvu kuronga, simbi simbi musanganiswa uye chigadzirwa kuburitsa, hinge gungano kubatana, uye yakaoma kufamba inofamba ...
Complex mamiriro epurasitiki muforoma
Simbi Machira 8407 Chikamu Chinyorwa ABS Mould Hupenyu 1,000,000 Nhamba yechipenga 1 Mould Injection Sisitimu inomhanya Mould Chimiro LKM Surface Kurapa Texture Zvichava zvinokwezva zvakanyanya kuita kuti kusanganisa uye kushanda kwakanyanya kwekugadzirisa michina kuburikidza nekunatsiridza kwe ...
Mould Vagadziri, Tsika Mould, Prototype Mould Vagadziri, Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Mould Factory, Plastic Kuisa richigadzirisa,